NYI LYNN SECK 18+ DEN: Diary 26.01.2010
Posted by NLS at 1/27/2010 11:30:00 PM
Do you also haveadownloadable font for Linux? (I use Linux Suse 11.1).
ဘုရားကိုမက်တာ ကောင်းတာပေါ့...း)
Zorr Win said...
Avator ???, any way interesting.
ဇော်ဂှီ၂၀၀၉ ကိုတင်ပီးနောက် အခုလိုတွေပေါ်နေတာဘာကြောင့်ပါလဲ၊ ဘယ်လိုပြင်ရမလဲခင်ဗျား။ ကျေးဇူးပြုပြီးပြောပြပေးပါ။
အဲဒီဘေးမှာတော့ တှောတှောကြီးတဲ့ သပိတ်ကြီးရှိတယ်။ သပိတ်က ဒီခေတ်သပိတ်လို မဟုတ်ဘူး။ ပိုပြားတယ်။ လက်တစ်ဖက်စာ အဝိုင်းရှိတယ်။ ထူးခြားတာက ပျော့တယ်။ ကောက်ရိုးရောင်။ ကျွန်တှော လျှောက်ကိုင် ကြည့်မိပြီး ရှေးလူတွေ ဘယ်လောက် ကြီးထွားလို့ ဒီလို သပိတ်မျိုး ကိုင်တာလဲလို့ စဉ်းစားနေမိသေးတယ်။ သူ့ဘေးမှာ ရွှေချထားသလို ဘုန်းကြီးတစ်ပားရဲ့ ရုပ်အလောင်းရှိတယ်။ ဒီအတိုင်းပဲ။ နာမည်က ကသဿသဖလို့ ရွှေပြားနဲ့ ရေးထားတယ်။ စေတီပတ်လမ်းအတိုင်း ကျွန်တှော လျှောက်ကြည့်တယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းတွေ မမှတ်မိတော့ဘူး။ မှတ်မိသမျှ ချရေးထားလိုက်တယ်။